AudioMob: Mgbanaka Na Ahịa Ọhụrụ nke Oge Na Mgbasa Ozi Audio | Martech Zone
Wednesday, December 30, 2020 Tọzdee, Disemba 29, 2020 Christian Facey
Mgbasa ozi ọdịyo na-enye ụzọ dị mma, nke ezubere iche, na nke nwere nchekwa maka akara iji belata mkpọtụ ma bulie ahịa ha na Afọ Ọhụrụ. Nrịgo nke mgbasa ozi ọdịyo bụ ihe ọhụrụ na ụlọ ọrụ na-abụghị redio mana ọ na -emepụta nnukwu mkpọtụ. N'etiti mkpọtụ ahụ, mgbasa ozi ọdịyo na egwuregwu ekwentị na-esepụta usoro nke ha; na-akpaghasị ụlọ ọrụ ahụ ma na-eto ngwa ngwa, ụdị na-ahụ ọkwa dị elu nke mgbasa ozi ntinye na egwuregwu egwuregwu. Ndị mmadụ na-arịwanye elu na egwuregwu mkpanaka, na-achọ ụzọ ọhụrụ iji mejuo ike ọgwụgwụ.
AudioMob bụ onye ọsụ ụzọ nke usoro ọhụrụ a: Google maka mmalite mmalite akwadobere nke mgbasa ozi ọdịyo na egwuregwu mkpanaka. Addị mgbasa ozi ha bụ nchekwa zuru oke ma dị omimi, yana ikike maka ụdị iji nwee obi ike ma kee ihe iji ruo ndị na-ege ntị.
Mgbasa mgbasa ozi na-ekwo ekwo karịa mgbe ọ bụla n'afọ a, yana ọtụtụ ụlọ ahịa anụ ahụ mechiri n'ihi mkpọchi agha agha n'ịntanetị ga-abụ asọmpi karịa oge ọ bụla. Ya mere, ụdị kwesịrị iji mara ihe karịa na mgbasa ozi ha na-etinye afọ a ka ha wee nwee ike nweta nsonaazụ ha chọrọ; ọdịyo mgbasa ozi na-enye ụgbọala zuru oke iji mee nke a.
Ndị na-azụ ahịa chọrọ Ahụmịhe Mgbasa Ozi Ka Mma
2020 abụrụla otu afọ na-enweghị afọ ndị ọzọ, ma jiri oge dị ukwuu nọrọ n'ụlọ, mgbasa ozi kpochapụwo ekpuchiwo ohere mgbasa ozi. Lockdown achụọ monotony n'ime ụwa, na-arụ ọrụ n'ụlọ, na-eri nri n'ụlọ na-egwu site n'ụlọ ugbu a weere dị ka ihe ọhụrụ.
Zụ ahịa Afọ Ọhụrụ n'afọ a ga - adị iche: ahịrị n'ọnụ ụzọ ma na - achọ ịre ahịa ikpeazụ ga - adị mma. Ebe ọtụtụ ụlọ ahịa na-emechi emechi n'ihu ọha, a na-ewere ahịa na ịntanetị, ndị na-ere ahịa nwere ike ịkpachara anya maka oge ọkọchị. Site na ekeresimesi jiri 2020 na-atụ anya ịda 7% ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga, site na nnukwu £ 1.5billion, mgbasa ozi mgbasa ozi kwesịrị ile anya na ị na-egwu egwuregwu ha iji mee ka ndị na-azụ ahịa nọrọ elu.
Ntụrụndụ bụ ntọala nke ndụ mkpọchi, yana TV, ihe nkiri, pọdkastị na egwuregwu mkpanaka niile na-aga n'ụzọ ụfọdụ iji dozie ọdịiche dị n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya na njikọ mebere. Okwu a maka ụdị bụ ịkọwapụta site n'ụdị dị iche iche: ndị ahịa na-ahapụ ihe na-agụ agụụ dị iche iche ebe anya ha na-achagharị anya na mgbasa ozi ọhụụ ọzọ. Afọ Ọhụrụ a bụ oge kwesịrị ekwesị maka ụdị iji tinye ntị ha n'ala, ma bulie usoro ọhụrụ iji gafere ndị asọmpi.
Egwuregwu bụ igodo
Akụ na-enweghị atụ maka ndị mgbasa ozi, egwuregwu ekwentị naanị mepụtara 48% nke ngụkọta ego nke egwuregwu zuru ụwa ọnụ n'afọ a, yana a nnukwu $ 77. Egwuregwu ekwentị gbasiri ike na ntụrụndụ mkpọchi, ọ bụghị naanị maka ndị na-eto eto eto. Ndị na-egwu egwuregwu na-egwu egwu amalitela kemgbe ọtụtụ afọ, ahịa ha na-echekwa na mberede sara mbara.
Taa, 63% nke ndị na-egwu egwuregwu mkpanaka bụ ụmụ nwanyị nwere afọ ndụ nke nwanyị gamer, 36 afọ.
MediaKix, Statmụ nwanyị na-eme egwuregwu ọnụ ọgụgụ
Egwuregwu ekwentị na-enye nnukwu ohere maka iru akara na-elekwasị anya na igwe mmadụ zubere. Ikpo okwu nwere ike ime ka ndị na-ege ntị na-egeghị ntị wee jikọta ndị ahịa na ndị ahịa. N’ikwu okwu dị mfe, egwuregwu mkpanaka nwere ike ijikọ akara na ndị na-ege ihe karịrị ijeri 2.5 ndị ​​na-egwu egwuregwu n’ụwa nile: nnukwu ikike nwere ike iru ụlọ ọrụ ntụrụndụ niile. Iji rite uru n’ahịa afọ ọhụrụ ama ama, ụdị ndị a kwesịrị ị listena ntị na ihe ndị ahịa ha chọrọ, yana ahịa ahụ: ọ ga - abụ ihe na - enweghị isi ọ bụla ịtụgharị uche ha gaa n’egwuregwu egwuregwu mkpanaka dịka nnukwu ego ha na - enweta.
Audio - Fkèala Ọhụrụ
Mgbasa ozi ọdịyo abụkwaghị mmachi redio na-agbasa ozi redio ekwenti site na iri afọ ndị gara aga. Ha nwere ike mara mma, dị mma, ma mepụta ahụmị gosipụtara nke ezigbo kọntaktị mmadụ.
Site n'enyemaka nke ndị ọkà okwu nwere ọgụgụ isi ihe na-adịgide adịgide n'ọtụtụ ụlọ ndị dị na US, mgbasa ozi ọdịyo dijitalụ jupụtara ebe niile. A na-anabatakwa ha nke ọma:
Na 58% nke ndị na-azụ ahịa na-achọta mgbasa ozi ọdịyo nke ọdịyo dị obere karịa ụdị ndị ọzọ, ebe 52% kwuru na ha na-etinyekwa aka!
Ọnụ-arụ ọrụ nke mgbasa ozi ọdịyo bụ nke abụọ na nke abụọ 53% nke ndi ahia mgbe ịzụrụ dabere na mgbasa ozi ọdịyo.
Na egwuregwu mkpanaka, enwere ike ịme mgbasa ozi ọdịyo ka ọ dịkwuo n'ihu ka ị nwee mmetụta dị ka eziokwu: enwere ike imikpu ha n'ime usoro okike, na-enye ụdị ọhụụ dị egwu ma dị egwu na mgbasa ozi ha.
O nwedịrị ike ịme egwuregwu ahụ gburugburu mgbasa ozi ọdịyo zuru ezu, na-agbakwunye na ahụmịhe niile maka onye na-egwu egwuregwu: dịka redio arụnyere na nso nso a nke Nwanna Nwanna: Egwuregwu, nke jiri usoro mgbasa ozi AudioMob iji nye mgbasa ozi ọdịyo n'oge egwuregwu.
Mmepe nke ọma DSP etinyela AudioMob na n'isi nke mgbasa ozi ọdịyo na egwuregwu, na-aghọ usoro nke ndị mmepe na-enwewanye mmasị. Ebumpụta ụwa dị egwu maka mgbasa ozi egwuregwu na-enweghị intrusive, na-eme ka ọdịyo na etiti dị egwu.
Ihe mgbasa ozi ọdịyo na-eme ka ndị egwuregwu nwee ike ịga n'ihu na-egwu egwu mgbe ha na-ekpughere ad; ha anaghị adọpụ uche ha ịhapụ egwuregwu ahụ mana ha ka na-etinye akara ahụ. Maka ndị na-eri ihe, ọ bụ mmeri ka ha nwere ike ịga n'ihu egwuregwu egwuregwu; n'ihi na ụdị, ha ka na-na-buru ibu na-esiwanye ezubere iche ikpughe; na ndị mmepe nwere ike hụ na ahụmịhe onye ọrụ na-enweghị nkwụsị na miri emi.
Ọ bụ mmeri mmeri na ohere ịpụ na igwe mmadụ n'oge ọtụtụ ụdị na-alụ ọgụ maka etiti.
Gee Ntị !dị!
Mgbasa ozi ọdịyo dị na trajectory ugwu, yana amụma nke uto ego nke 84% site na 2019 ruo 2025, AudioMob na-enyekwa azịza dị ọcha ma mara mma maka ụdị iji banye n'ahịa ahụ. Ebe ọtụtụ ụlọ ahịa dị iche iche mechiri emechi ma mkpọsa Afọ Ọhụrụ na-emewanye ihe okike, ebe agha maka ụdị jupụtara na mkpa ibili karịa ndị asọmpi.
AudioMob agbatị ohere abụọ buru ibu maka ụdị iji belata mkpọtụ nke ụlọ ọrụ ahụ: egwuregwu mkpanaka bụ gburugburu ebe obibi na-enwe ọganihu maka itinye ad na nnukwu ndị na-ege ntị na-eru ebe mgbasa ozi ọdịyo na-ebugharị ahụmịhe na nke na-enweghị nsogbu maka onye ọkpụkpọ ahụ.
Mgbasa ozi ọdịyo nwere ike ịkwalite mgbasa ọhụụ nke Afọ Ọhụrụ karịa ndị ọzọ na 2020, AudioMob na-akwọkwa ụlọ ọrụ ahụ iji mepụta mgbasa ozi ọdịyo ka mma, nke na-atọ ụtọ, na nke miri emi.
Gaa Leta AudioMob Maka Ozi Ndị Ọzọ
Tags: ọdịyo mgbasa ozimgbasa ozi ọdịyoọdịyo dspigwe ọdịyoNkejiegwuregwu mgbasa oziegwuregwuvideo egwuregwu mgbasa ozi
Amalitere m AudioMob n'ihi na m ghọtara nkụda mmụọ ndị na-egwu egwuregwu na-enwe mgbe mgbasa ozi na-emebido egwuregwu ha. N’ịchịkọta ụfọdụ ụbụrụ kacha mma na ụlọ ọrụ ahụ, azịza AudioMob na-enye ụzọ maka ndị mmepe egwuregwu mkpanaka iji kpata egwuregwu ha site na mgbasa ozi ọdịyo ma na-echekwa ndị egwuregwu ha.